Faallo: Baarlamaan iyo Dadweyne ‘Guusha Farmaajo’ – Kasmo Newspaper
Faallo: Baarlamaan iyo Dadweyne ‘Guusha Farmaajo’
Updated - February 9, 2017 11:09 am GMT
Waa guul ballaaran, waxaana qorantay taariikhi 8da Febraayo. Waxay ka muuqataa wejiyada farxadda la iftiimay ee dadka Soomaaliyeed, meel ay joogaamba.
Go’aanka in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guuleystay, iyo hal mar oo farxad lala soo butaacay, Waxay muujinaysaa nacaybka loo qabay Xasan Sheekh iyo in ololihiisa doorasho laga soo hagayey Addis Ababa.
Guushaasi maaha mid hal qof gaaray, waxaana natiijadu ka muuqataa dabaaldegyada ka socda magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Burco, Boorame, Baardheere, Boosaaso, Beledweyne, Buur-xakaba iyo Beled-xaawo.
Waxaa dabaalddegaysa Hargeysa, Ciiro-gaabo, Gaalkacyo, Caabudwaaq, Ceelbuur iyo Cadaado, Guri-ceel, Jawhar, Marka, Laascaanood, Laasqoray iyo Baraawe.
Baraha Bulshadu ku xiriirto – Social Media – waxay isu gudbinayeen dhambaallada farxadaha ah ee 8da Febraayo, welina waa socotey..
Run ahaan, maaha buunbuunin haddii la yiraahdo, xaaladdii dalku, waqti yar gudaheed ayey isku beddeshay, oo niyad-jabkii waxaa beddelay rejo; colaaddii waxaa ku soo socota nabad…
Wargeyska Kasmo wuxuu bogaadinayaa labada Aqal ee Baarlamaanka 10aad, wuxuuna hambalyeynayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay sugayso hawl baaxad leh. Dal saboolnimo, musuq, abaar iyo gunnimo feenatay.
Baarlamaanku waa fuliyey farriintii iyo dalabkii dadweynaha, shacabkiina wakaas meel walba isugu soo baxay dabaaldedgga. Hadda waxay hawli la taallaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Midnimo, nabad iyo horumar.